Taariikh Nololeedka Musharaxa Da,da Yar Ee Cali Jaamac Caraale | Berberatoday.com
Taariikh Nololeedka Musharaxa Da,da Yar Ee Cali Jaamac Caraale
Cali jamaca Carale wuxu ku dhashay magalada Berbera sanadki 1979.wuxu ka bilaabay waxbarashadiisi Dugsigi hoose e hablaha e loo yaqaney cajab sanadki 1987.Burburki dawladi Somalia kadib Cali Jamac wuxu waxbarasho ka bilaabay 1991 Madarasatul Al salixiya o waqtiga ahayd goobta ugu tayada fiican Diini iyo Maadiba.1992 ayu hadana waxbarasho ka bilaabay Dugsigi Bisha Cas oo hada loyaqan Dugsiga Dhexe Saxil.sanadahi 2001-2004 wuxu kuso qaatey dugsigisi sare Bursade secondary School.2007 ayu Cali Jamac noloshiisi dhalinyarnimo ubedelay nolol qoys isago sanadkas aqal galey Isla markaana masuuliyad qaadey.Cali Jamac waxa ilahey ugu deeqay laba caruura oo Kala ah hal wiil iyo gabadh.sanadahi 2009-2012 ayu Cali Jamac so dhamaystey waxbarashadiisi jamacada.
AASAASKI Yovenco Ngo
10 March 2001 Cali wuxu kamid aha dhalinyaradi maskaxdooda ay kaso maaxatey aasaaska iyo udhidib dhigida Hayada wadaniga ah ee Yovenco o Berbera lagu aasaasey.Iyago xiliga bilabey inay qabtaan hawlo badan oo mutadawacnimo ah sida khatarti bacmiikada o kale.sanado badan ayu Cali ka aha Gudoomiyaha Hayadas wadaniga ah isago gadhsiiyey Heer ay kufani karan isaga iyo saxibadi.
Cali shaqadisi uhoreysey wuxu bilaabay sanadki 2005 isago ka bilaabay Hal shipping clearance and forwarding Agency.sanadihi 2006-2010 Cali wuxu kaso shaqeeyey xawaladi Qaran Express o ah halka magaca Cali Qaran kaso raacey.
Cali Jamac waxa kale oo aanu ka madhnayn mihnada kubada cagta o uu kooxo badan macalin kaso noqdey isago ciyaaryahano aad qaali u ah so laylyey.
Sanadihi 1996-1998 wuxu macalin ka aha kooxdi aadka lowada jecla e kubada fiicnayd Intersomal Airways o ahayd koox ila hada aad lo xasuusto.
Sanadihi 2003-2004 wuxu macalin ka aha kooxihi kastamka iyo FAA Co oo u labada sanaba keenay ciyaarta kama dambaysta Final Game.
HOBBIES( WUXU JECELYEY CALI)
1:- Inu gargaaro dadka masakinta ah
2:- Akhriska buugta
3:- Daawashada Aflaamta
Iyo marku Yara u dabaasha u aad ujecla.
Hadaba hada tahey muwadin ku nool gobolka saxil miyeynu codkeena Kala bakhayli karna shaqsiga jidkaas dheer somarey si uu dadaal badan ugeliyo horumarinta gobolka iyo degmada BerberA.
Miyaan ka horaysin karna nin Berbera uyimi Inu iska sharaxo oo keliya berina hargaysa fadhiista.
Kudarso lagaso bilaabo 1979-2016 o noqonaysa 36 Sano Cali wuxu noloshisa kuqatey Magalada Berbera.
Hada tahey muwadin reer Berbera ah codkaagaa sii xiliban Cali Jamac Kuna dooro kartidiisa,taarikhdiisa iyo daacadnimadisa.